Jordan မြို့ တော် Amman နှင့် နာမည်ကျော် ပင်လယ်သေအပါအ၀င် ရှေးဟောင်းမြို့ များသို့လည်ပတ်ပါမယ်
Day : 1 Amman (Dinner)
Amman လေဆိပ်မှ ဧည့်လမ်းညွှန်မှကြိုဆိုပြီးလျှင် Al Fanar ဟိုတယ်တွင် အနားယူပါမည်
Day :2Amman (Breakfast/Lunch/Dinner)
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး Amman မြို့ကို City Tour သွားပါမည်။ ပြီးလျှင် နာမည်ကျော် Desert Castles များသို့ သွားရောက်လည်ပတ်လေ့လာပါမည်။ ဟိုတယ်သို့ပြန်ကာ ညနေစာ သုံးဆောင်ပြီး အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :3Amman-Jerash (Breakfast/Lunch/Dinner)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး ဂရိ-ရောမ ခံတပ် ရှိရာ Jerash မြို့သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ ပြီးလျှင် Jordan မြောက်ဘက် တောင်ပေါ်ဒေသ Ajloun မြို့သို့သွားရောက် လည်ပတ်ပါမည်။ ဟိုတယ်သို့ပြန်ကာ ညနေစာသုံးဆောင်ပြီး အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :4Amman-Madaba-Dead Sea (Breakfast/Lunch/Dinner)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး ရှေးဟောင်း Jordan မြို့ဖြစ်သော Madaba မြို့သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ နာမည်ကျော် St. George Church , Virgin Mary Church နှင့် အရှေ့ရောမအင်ပါယာဂရိ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များရှိရာ Madaba Archaelogical Park တို့ရှိရာမြို့ဖြစ်သည်။ ပြီးလျှင် ခရစ်ယာန်ကျမ်းစာပါ Nebo တောင်တန်းအပေါ်မှ Jordan ပင်လယ် နှင့်အတူ ဒေသ၏ မြင်ကွင်းကျယ်ရှုခင်း ကိုသွားရောက် ကြည့်ရှုပါမည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် နာမည်ကျော် ပင်လယ်သေ သို့သွားရောက် လည်ပတ်ပြီး Ramada Resort ဟိုတယ်တွင် ညနေစာသုံးဆောင်ပြီး အနားယူပါမည်။
Day :5Dead Sea-Petra (Breakfast/Lunch/Dinner)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး ပင်လယ်သေဒေသရှိ အကြီးဆုံး Castle သုံးခုတွင် တစ်ခုဖြစ်သော Kerak Castle ရှိရာ Kerak မြို့သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ ပြီးလျှင် Petra မြို့သို့ A/C Modern Bus သို့သွားရောက်ပြီး Al Anbat ဟိုတယ်တွင် ညနေစာသုံးဆောင်ပြီး အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :6Petra (Breakfast/Lunch/Dinner)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး Petra မြို့ Full day visit သွားပါမည်။
Day :7Petra-Amman (Breakfast/Lunch/Dinner)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး ကမ္ဘာ့ UNESCO စာရင်းဝင် Beidha ဒေသသို့ သွားရောက်လေ့လာပါမည်။ ပြီးလျှင် သဲကန္တ္ဘာဒေသ ဖြစ်သော Wadi Rum Village သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ Amman ရှိ Al Fanar ဟိုတယ်သို့ ပြန်လည်သွားရောက်ပြီး ညနေစာစားကာ အနားယူပါမည်။
Day : 8 Amman (Departure)
Amman လေဆိပ်မှ ပြန်လည်ထိက်ခိာပါမည်
1. English စကားပြော coordinator များ
2. ခရီးစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသော hotel (သို့) အလားတူ Hotel စရိတ်7ညစာ (Breakfast နှင့် Dinner ပါပြီး)
3.6ယောက်နှင့်အထက် group များအတွက် English စကားပြော guide
4. ခရီးစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသော ဝင်ကြေးစရိတ်များ
5. Petra မှ Al Siq ထိ 800 meter horse riding ( Petra ticket ပါပြီး )
6. Jordan အတွက် free visa (for non-restricted nationality)